Xog: Khilaafka Cabdi Weli Gaas iyo C/xakiin Cameey oo arrin xun horseeday | Allbanaadir News
Xog: Khilaafka Cabdi Weli Gaas iyo C/xakiin Cameey oo arrin xun horseeday
May 23, 2018 - Aragtiyood
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa C/Xakiin Cumar Cameey ayaa waxaa soo baxaya khilaaf u dhaxeeya kaas oo sababay in todobaadyadii la soo dhaafay aysan wada shaqeyn labada mas’uul.
Khilaafkan waxaa uu soo baxay kaddib markii Bishii March Golaha shacabka ee Soomaaliya ay soo saareen qaraar dalka looga mamnuucay Sharikadda DPWorld ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta,waxaana go’aanka golaha shacanka diiday C/Wali Gaas halka C/Xakiin Cameey uu taageeray.
Kulan ay Golaha wasiirrada Puntland yeesheen kaddib go’aankii Golaha shacabka ayuu C/Wali Gaas ku doonayay in warqad lagu diidayo go’aankaas ay soo saarto Puntland waxaase diidey madaxweyne ku xigeenka iyo qaar ka mid ah xubnaha Golaha wasiirrada.
C/Wali Gaas ayaa kaddib u safray Imaaraadka Carabta iyada oo markii uu ku soo laabtay Garoowe uusan soo dhaweyntiisa ka qeyb gelin C/Xakiin Cumar Cameey.
Waxa kale oo jirta in muddo todobaadyo ah uusan Cameey xaadirin xafiiskiisa shaqada oo uu sare u kacay khilaafka Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
C/Xakiin ayaa inta badan waqtigiisa ku bixiyay dagaalka degaanka Tukarraq ee Gobolka Sool oo uu ka soo jeedo halka Gaas uu ku mashquulay shirkii dowlad Goboleedyada iyo siyaasadda Maamulka Puntland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland iyo Madaxweyne ku xigeenka ayaa lagu tuhmayaa in ay ka gaabiyeen saameyntooda siyaasadeed ee Gobollada ay ka soo jeedaan oo hadda ay ku dagaallamayaan Puntland iyo Somaliland.